Fanomezana dimy mety indrindra amin'ity Krismasy (II) ity: lozisialy | Vaovao IPhone
Manohy manolotra ny hevitry ny mpamaky izahay ho an'ireo fanomezana Krismasy izay sarotra be ho an'ny olona sasany indraindray. Ny andro lasa izay dia efa niresaka momba ny kojakoja mety ho an'ny iPhone sy iPad izay azo antoka fa ho fankasitrahana an'izay rehetra nahazo azy ireo izahay, ary androany hiresaka momba ny rindranasa izahay. Manomeza fampiharana ho fanomezana? Fa nahoana no tsy? Apple dia manolotra fomba tena tsotra ho an'ny olona hanome fanomezana ho an'izay tiany, mila mahafantatra ny adiresy mailakao fotsiny ianao ary dingana tsotra be izany. Ankoatr'izay, ny fanomezana dia ho an'ny fiainana satria hifandray amin'ny Apple ID ny mpandray izany. Manolotra anao ny soso-kevitra izahay
2 Kitapo famokarana Readdle
3 Toca Boca, lalao ho an'ny ankizy
4 Final Fantasy 6 + 1
5 Rivotra mahery
Klasika tsy miala amin'ny lamaody mihitsy. Marina fa amin'ny alàlan'ny Apple Maps sy Google Maps no manome ny làlana mety hitarika anao mankany amin'ny toeran-kalehanao dia toa tsy ilaina intsony ny mpitety GPS, fa tsy misy manolotra ny fahamendrehana sy ny safidin'ny TomTom. Ny sary dia lavitra lavitra ny tsara indrindra ao amin'ny App Store, fa ny antoka fa tsy hahomby mihitsy ianao, tsy mila fifandraisana data ianao hampidinana ireo sari-tany ary azo antoka ny fanavaozana. Azo antoka fa misaotra anao ny nahazo ity fanomezana ity.
Kitapo famokarana Readdle
Rehefa miresaka momba ny fangatahana famokarana isika dia misy referansa ao amin'ny App Store: Readdle. Ny fampiharana azy dia tsara ary mandrakotra sehatra maro. Avy amin'ny Calendars 5 mahafinaritra, iray amin'ireo rindranasa kalandrie tsara indrindra izay azonao jerena ao amin'ny App Store, mankany amin'ny Scanner Pro tena tsara, iray amin'ireo fangatahana tohatra antontan-taratasy miaraka amin'ny valiny tsara indrindra sy fampidirana bebe kokoa amin'ny rafitra noho ny fanitarana. Printer Pro no vahaolana mety indrindra ahafahana manonta amin'ny mpanonta amin'ny alàlan'ny WiFi nefa tsy mila azy hifanaraka amin'ny AirPlay. PDF Expert 5 dia iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra hitsaboana PDF izay azonao jerena ao amin'ny magazay fampiharana Apple. Fampiharana efatra, manerantany ho an'ny iPhone sy iPad, izay hamadika ny fitaovanao ho fitaovana miasa tena izy. Ny fividianana ireo rindranasa ireo dia mitentina 23,66 €, ary raha atao amin'ny alàlan'ny fonosana efa misy dia € 17,99 ihany. Azonao atao ny miditra amin'ny fonosana ao amin'ny App Store avy amin'ity rohy ity.
Toca Boca, lalao ho an'ny ankizy
Efa fantatrao fa ao amin'ny Actualidad iPad dia mpanaraka mahatoky an'i Toca Boca izahay, iray amin'ireo mpandraharaha mahomby indrindra sy ekena indrindra amin'ny lalao ho an'ny ankizy, miaraka amin'ny lalao manana kalitao tena tsara, tsy misy dokam-barotra na fividianana miharo, ary mampifangaro tanteraka ny fianarana sy ny fahafinaretana. Toca Big Box dia fonosana iray ahitana ny 10 amin'ireo lalao tsara indrindra amin'ny € 14,99. Toca Hair Salon, Toca Kitchen, Toca Train… lalao folo hifalian'ny ankizy kely ao an-trano rehefa mianatra. Azonao atao ny misintona ny fonosana avy amin'ny ity rohy mivantana amin'ny App Store ity.
Final Fantasy 6 + 1
Tsy azo lazaina firy momba ity lalao lalao video mahafinaritra ity, na dia misy fanemorana aza, dia vita tsikelikely ao amin'ny App Store. Square Enix, mpamorona an'ity lalao video ity izay nanjary iray amin'ireo be mpahalala sy be mpanaraka indrindra eran'izao tontolo izao, dia manolotra ity fonosana ity izay misy lohateny 7: Fantasy farany I, II, III, IV ary IV: Ny vanim-potoana aorian'izay, V ary VI. Araka ny azonao an-tsaina, raha tsy mora ny tsirairay amin'izy ireo, dia tsy ho izy koa ny fonosana, fa hitahiry € 25 ianao amin'ny alàlan'ny fividianana azy rehetra miaraka, satria € 62,99 (vidiny 88,43, € XNUMX) ihany no vidiny. Azonao atao ny mahita ny fonosana feno avy ity rohy mankany amin'ny App Store.
Raha toa lafo loatra ny vidin'ny fonosana Final Fantasy, Square Enix dia manolotra iray hafa amin'ny kilasiny, Chaos Rings, ao anaty fonosana iray miaraka amin'ireo fanaterana telo ho an'ny antsasaky ny vidin'ny Final Fantasy, na dia eny, tsy iraisan'ny rehetra izy ireo ary noho izany dia tsy maintsy manapa-kevitra ianao raha hanome ireo izay mifanaraka amin'ny iPhone na iPad. Azonao atao ny misintona ny fonosana iPad avy amin'ity rohy ity, amin'ny € 30,99 fotsiny, ary ny fonosana ho an'ny iPhone avy amin'ity rohy hafa ity amin'ny € 26,99 ihany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Fanomezana dimy tsara ho an'ity Krismasy (II) ity: lozisialy
Clone Alarm, tweak ho an'ireo nametraka fanairana maro